Mid ka mid ah shaqaalahayga oo ku jira fasax jirro iima soo dirin fasaxiisa cusub ee jiran mana ku laabanin shaqadiisa ka dib joojinta shaqada. Wuxuu igu eedeynayaa inaanan abaabulin booqasho dabagal ah oo ku saabsan daawada shaqada. Ma u tixgelin karaa maqnaanshahan sidii ka tegitaan shaqadayda oo aan eryi karaa shaqaalahayga?
Maxkamadda Cassation ayaa dhowaan ku khasbanaatay in ay xukunto kiis la mid ah.
Maqnaanshaha aan cudurdaarka lahayn: goobta booqashada ku noqoshada
Fasax jireed muddo hal bil ah ayaa loo aasaasay qofka shaqaalaha ah. Dhamaadka joojintaan, shaqaaluhu isagoon ku laaban xaruntiisa shaqana uusan u dirin wax kordhin ah, loo shaqeeyaha ayaa u diray warqad uu kaga codsanayo inuu qiil u siiyo maqnaanshihiisa ama uu dib u bilaabo shaqadiisa.
Maqnaanshaha jawaab, loo shaqeeyaha ayaa shaqada ka eryay qofka ay khusayso anshax xumo ba'an oo ka dhalatay maqnaanshihiisa sabab la'aanta ah, taas oo sida ku cad loo shaqeeyuhu astaan ​​u yahay ka tagistiisa shaqadiisa.
Shaqaaluhu wuxuu qabtay maxkamadda wershadaha, isagoo la tartamaya xil ka qaadistiisa. Sida laga soo xigtay isaga, iyada oo aan loo helin wicitaan ku soo noqnoqoshada baaritaanka dawooyinka shaqaalaha, qandaraaskiisa waa la joojiyay, sidaa darteed ma uusan haysan
Cudur: shaqaale aan soo sheegin shaqadiisa joojinta miyaa laga dhigi karaa shaqo la'aan? July 8th, 2021Tranquillus
horeKa mamnuuco khaladaadka higgaadinta shaqada
socdaMagdhowga lagu bixiyay heshiiska wadajirka ah ee shaqada Axadda ma khuseeyo dhammaan shaqaalaha shaqeeya maalintaas!